Usuzokhishwa umbiko ngezindleko ezakhokhwa kungafanele kungcwatshwa uMandela | News24
Usuzokhishwa umbiko ngezindleko ezakhokhwa kungafanele kungcwatshwa uMandela
Johannesburg – UMvikeli woMphakathi uBusisiwe Mkhwebane kulindeleke ukuba awukhiphe namuhla (ngoMsombuluko) umbiko mayelana nezindleko ezakhokhwa kungafanele kulungiselelwa umngcwabo walowo owayenguMengameli wakuleli.
Okhulumela uMkhwebane uCleopatra Mosana uthe uMvikeli woMphakathi wenze uphenyo mayelana nezinsolo zokuthi kwasetshenziwa imali yomphakathi, futhi uhulumeni wesifundazwe sase-Eastern Cape akazange ayisebenzise ngendlela imali ebambisene namanye amagatsha kahulumeni ukuhlela umngcwabo kaNelson Mandela.
Lolu phenyo lwaqalwa wuThuli Madonsela ngesimemezelo asenza ngo-2016 lapho eveza khona ukuthi kuzokwenziwa uphenyo mayelana no-R65 milion owasetshenziswa kuhlelwa lomngcwabo.
Omasipala abaningi kulesi sifundazwe bayathinteka ekuhlanganiseni lemali ngaphandle kokulandela imigomo efanelekile yokuthola lesi samba.
OLUNYE UDABA:UMugabe uthi uMandela 'wadayisa' abantu abamnyama eNingizimu Afrika
Kuthiwa ngoMey 2016 kwasetshenziswa imali engango-R22m ukwenza izikibha, wukudla kanye nezinsiza zezokuthutha.
Yize kunjalo inhlangano i-African National Congress iyawaphika amahlebezi wokuthi basebenzisa imali kahulumeni ngendlela engafanelekile.
UMandela washona mhlazingu-5 kuDisemba 2013.
UMvikeli woMphakathi uzokwethula lombiko ehhovisi lakhe ePitoli ngo-14h00 emini.